ကျိုက်ထီးရိုး တွင်တည်းခိုနေစဉ် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည်ဟုအမှုဖွင့်ထားသော ကိုးရီးယားနိုင်ငံသူ နေရပ်ပြန်
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ဆီးမီးကိုးထောင် ဓမ္မာရုံအနီးရှိ ရိုးရိုးလေးဟိုတယ် တွင် တည်းခိုနေစဉ်အတွင်း အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည် ဟုဆိုကာကင်းပွန်းချောင်း နယ်မြေရဲစခန်းတွင်အမှု ဖွင့်ထားသော ကိုးရီးယား နိုင်ငံသူ Ms. Moon Jung သည် ကိုးရီးယား နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကျိုက်ထို မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲမှူးဝင်းမြင့် ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကိုးရီးယား နိုင်ငံသူ Ms. Moon Jung ဇွန်လ ငါးရက်နေ့တွင် ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့ပြန်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ကိုးရီးယားနိုင်ငံသူ တိုင်ကြားထားသော အဓမ္မပြုကျင့်မှု (ပ) ၃၅/၂၀၁၆ ၊ပုဒ်မ ၃၇၆/ ၅၁၁ ဖြင့်ကင်ပွန်း ချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားပြီး ၎င်း၏ အမှုမပြီးပြတ်သေးဘဲ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ သို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်း ကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
“ သူက တရားရုံးပြောတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သူ၏ ချစ်သူ နဲ့အတူရှိခဲ့တယ် လို့တော့ထွက်ဆိုတယ်” ဟု ရဲမှူးဝင်းမြင့် ကပြောပြသည်။
အဆိုပါ ကိုးရီးယား နိုင်ငံသူ ကို မှုခင်းဆရာဝန်များဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်း ၏ ဆေးစစ်ချက်များအရ မိန်းမခန္ဓာ အတွင်း ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ မတွေ့ရှိကြောင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး မှ မှုခင်းဆရာဝန်များ ၏ စစ်ဆေးမှု ထုတ်ပြန် ချက်များအရသိရှိရသည်။
ရိုးရိုးလေး ဟိုတယ်အတွင်း တည်းခိုခဲ့သော ကိုရီးယားနိ်ုင်ငံသူ Ms Moon Jung သည် ၎င်း အိပ်ပျော်နေစဉ် မိန်းမ အင်္ဂါ အတွင်း ကွန်ဒုံးဝင်ရောက် နေသည်ဟု ဆိုကာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုဖြင့် အမှုဖွင့် ခဲ့ခြင်း လည်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကွန်ဒုံး ကိုဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင်လည်း လိင်ဆက်ဆံ ထားသည့် လက္ခာ မတွေ့ရှိရကြောင်း အဆိုပါ စစ်ဆေးချက်များ အရသိရှိရသည်။
မေလ ၃၀ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁၁ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ရိုးရိုးလေးဟိုတယ်သို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသူ Miss Moon Jung ပတ်စ်ပို့ M-90414834 တိုးရစ်ဗီဇာ C-540879 အသက်၂၅ နှစ်ဖြစ်သူ ရောက်ရှိလာပြီး အခန်းအမှတ် ၂၂၆ တွင် တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျိုက်ထိုမြို့မရဲစခန်းမှ သိရှိရသည်။
ထို့နောက် မေလ ၃၁ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီခွဲအချိန်တွင် အိပ်ယာမှ ထပြီးနောက် အခန်းအတွင်းရှိ ရေချိုးခန်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ရေချိုးရန် အဝတ်အစားများချွတ်စဉ် ၎င်း၏ မိန်းမအင်္ဂါအတွင်းမှ ကွန်ဒုံးထွက်ကျလာခဲ့ကြောင်း ကင်းပွန်းချောင်း ရဲစခန်းထံမှ သိရှိရသည်။
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးသင်ယူ လေ့လာ မွန်သင်ခန်းစာ